IGibhithe lasendulo lalazi futhi lenza uFaroonic Yoga Sema Tawy - Afrikhepri Fondation
IGibhithe lasendulo lalazi futhi lokwenza i-Yoga Phara Sema Tawy
DEncwadini yabo ethi Le Yoga des Pharaons, u-Yogi Khane nomkakhe uGeneviève Khane (Agrégée no-Docteur es Lettres, abaphothule izifundo ze-Egyptology e-University of Montpellier) bakhombisa ukuthi iGibhithe lasendulo lalazi futhi lisebenzisa i-hatha-yoga, kanye neqoqo eliphelele lokuma okumi mpo. Lokho esikubiza namuhla ngokuthi "i-Pharaonic Yoga" noma "i-Yoga yaseGibhithe" kuchaza konke ukuma kweGibhithe okubonakala ngokuma kwazo.
I-Yoga Pharaonic kanye nezinkolelo zase-Asia
Kodwa-ke, ukuma kwama-pharaonic akuphikisani nezinhlobo ezahlukahlukene ze-yoga ezenziwa eNdiya nakwezinye izindawo zase-Asia. UCaitanya, umphathi omkhulu we-bhakti-yoga, obhekwa njengomuntu kaKrishna, uvame ukuboniswa ngezingalo eziphakanyisiwe, ngesimo sengqondo esiseduze nesimo seGibhithe "sokuphakamisa isibhakabhaka". Engadini yethempeli laseWat-Po, eBangkok, sithola i-yogi enezingalo zakhe ngendlela efanayo. Siyazi futhi ngezibonelo zezithombe ezibunjiweyo zikaBuddha zimile, izingalo kusibani samakhandlela. Ngesikhathi somcimbi lapho bethola khona intambo engcwele, amaBrahman nawo aphakamisa izingalo zawo othini lwezibani.
IGibhithe ingumthombo wezici eziningi zempucuko yaseNtshonalanga: umuthi, i-physiotherapy, izibalo, ezokwakha, ifilosofi ngokuyinhloko ikhuthazwe yifa laseGibhithe elidluliswa yiGrisi. IGibhithe nayo ingumsuka wezimpawu zobuKristu kanye ne-alchemy. Igama elithi "alchemy" libuye lisuselwe egameni laseGibhithe elithi Kemet, igama elalibiza iGibhithe.
Isimo esime mpo se-yoga yase-Pharaonic kulula ukufinyelela kuso, futhi ukulandelana okunamandla okuphakanyiswe ngu-Yogi Khane kusuka emidwebweni nasezinsizeni zamathempeli aseGibhithe, kulungele ikakhulukazi abaseNtshonalanga nakubantu namuhla. . Azidingi ukuguquguquka okuthile futhi zingasetshenziswa ngokunenzuzo ekulungiseleleni ukuma okuthile kwe-hatha-yoga.
I-Yoga evela eGibhithe lasendulo laseGibhithe ingenziwa nganoma yisiphi isikhathi
Izingane ikakhulukazi ziyazisa ihlangothi layo elinamandla. I-yoga yaseGibhithe ibasiza ukuba baqaphele imizimba yabo futhi baqondise kangcono ukunyakaza kwabo. Ubafundisa indlela yokuhambisa amandla abo.
Intsha yathola ukuthi lokhu kuyalwa kuthuthukisa amandla abo okugxila futhi kuyabasiza emsebenzini wabo wesikole: ngemuva kweseshini ye-yoga yaseGibhithe, bathi basebenza ngokushesha nangempumelelo. Bakuthola kulula ukulungisa ukunaka kwabo nokubamba izifundo zabo ngekhanda.
Kulabadala, umkhuba we-yoga we-pharaonic uvumela:
• ukuvuselela amandla
• Ukuvuselelwa kokuthunyelwe kwangasese
• ukuthuthukiswa kanye nokubuyiswa kwemikhumbi
• ukuthuthukiswa kwemisebenzi yobuchopho: ukuhlushwa, ukukhumbula ngekhanda, ukuqapha.
Abesifazane bazwela kakhulu ubuhle be-yoga yaseGibhithe. Amadoda ayazisa uhlangothi lwawo olunamandla, ukunemba kwalo, ukukhwabanisa kwalo.
Ama-physiotherapists amaningi ahlanganisa umkhuba we-yoga yase-Pharaonic ngezikhathi zokuvuselela abanikeza iziguli zabo, ngoba lesi siyalo sisiza ukuvuselela uhlelo lwe-musculoskeletal.
I-yoga yaseGibhithe ingenziwa emibonweni yokuphila kwansuku zonke:
• ngenkathi eme
• ngenkathi ehlezi esihlalweni, ebhentshini noma esitokisini kanye nasemgqeni
• ngenkathi ulele phansi.
Akudingi imishini ekhethekile. Ngakho-ke kuye kwaziswa njengendlela yokuzivocavoca ekhefu emafenjini namahhovisi e-Algeria.
Incwadi Yokuphila YeWundlu ngomsindo (ngemisho)
Bheka izigcawu (2016)